နေအိမ် ဖုန်းကို Hack ဖုန်းကိုဘယ်လို Hack မလဲ
ဖုန်းကိုဘယ်လို Hack မလဲ
အဆင့် ၁: Minspy အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးပါ dan dapatkan paket berlangganan berdasarkan ponsel target- Android atau iPhone. Wizard penyiapan Minspy akan dimulai.
အဆင့် ၂: a.) Jika Anda ingin meretas iPhone, cukup verifikasi kredensial iCloud mereka dengan Minspy. Minspy membutuhkan waktu beberapa menit untuk memverifikasi dan menyinkronkan data.
အဆင့် ၃: Anda siap untuk memantau telepon target. Klik ‘Mulai’ untuk memulai perjalanan keren.
မလွတ်စေနဲ့: ဖုန်းပုံရိပ်များကိုဘယ်လို Hack မလဲ
ယခင်ဆောင်းပါးစာသားမက်ဆေ့ခ်ျကို Hack နည်း
နောက်ဆောင်းပါးတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းကိုသူတို့ရဲ့နံပါတ်နဲ့ပဲဘယ်လို hack မလဲ